WARARKA BARAAWEPOST kHAMIIS 10 JANUARY 2008
JAWAABTA QORAALLADII GEELJIRAHA EE LAGU DAABACAY WEBKA ssu
Walaal Geeljire Salaan kadib, waxaan kuugu hambalyeynayaa sida aad u habeysay, iskuguna dubbariday qoraalladii is-dabajooga ahaa ee lagu daabacay bogga SSUNION iyo sida aad iskugu xir xirtay, iskuguna toos toosisay ereyada xambaarsan ”aflagaaddada, eedeynta, cambareytan iyo been abuurka” aan salka & raadka toona lahayn,kuwaas oo ku wajahan shakhsiyaal magacyadooda si dadban qoraalada loogu muujiyey.
Inkastoo qoraalladaasi lagu saxiixay magac khayaali oo aan dhab ahayn (Fiction), haddana waxaa xaqiiqa ah in wararka iyo tacbiirka ereyada aysan ahayn kuwa ka soo baxay maankaaga iyo maskaxdaadaba, balse ay yihiin ”LAHJAD” ay is-ticmaalaan mar kasta dad magac & sharaf ama qaddarin aan ku lahayn Bulshada Shangamaas, Toorre iyo Todoba Tol dhexdooda. Dadkaas oo ah dadkii dulmiyey bulshadeena oo noloshooda iyo xaaladooda dad oo aad u liidatay, qaxootinnimona ku noolaa Waddanka Kenya, gaar ahaan Magaalada Mombasa. Dadkaas ficiladooda iyo khiyaanadooda, taariikhda ayaa xusi doonta, waayo Dunida qofkii magaca, danta & sumcadda Ummadda ka shaqeeyay iyo midkii lugooyadeeda iyo xasuuqeeda ka shaqeeyey isku meel ma galaan, iskusina wax ugama mudna.
Sidaas darteed, uma arko in aan faallo ka bixiyo, waqtina aan ku lumiyo khuraafaadka, been abuurka iyo kutiri-kuteenka lagu soo xusay qoraalladaasi, hase yeeshee, waxaan doorbiday in aan ku xusuusiyo ”Geel Beelow” Maah-maah Soomaali ah oo oranaysaa: ”Ninkaan kula fureyn yuusan kula rarin”. Waxaana maah-maadan loo adeegsadaa marka la tilmaamayo qof dhinac kaliya wax kaala qabta ee min bilow iyo dhamaad aan wax kula wadi doonin yuusan kaasi waxba kula bilaabin si aadan u lug’go’in.
Sidoo kale, waxaan kugula talinaaya in aadan noqon ”Doqonkii la yiri xarig sii, isaga is-daldali doonee (give the fool a rope and he will hang himself) oo loola jeedo qofka garashada yar ee wax u dan ah iyo wax u nacab ah midna aan garaneyn, arrinta lagu dilaayo isagoo wata oo waxaa la arkaa isagoo la ordaya, taasna waxaa daliil u ah in aad faraha la gashay arrimo aadan aqoon iyo cilmi midna u lahayn, awoodaadana ka baxsan, adeegena aad u noqotay dad isku bahaystay in ay kala dhantaalaan midnimada Bulshada Reer Baraawe si ay danahooda gaar ahaaneed ee xaaraanta ku dhisan u gaaraan, ayagoo u maraaya waddo kasta oo ay is-leeyihiin inay ku gaari doonaan hadafkooda.
Geel-Jirow, haddii aad tahay qof aqoon u leh taariikhda Saldanada Beesha Tunni iyo maraaxilkii ay soo martay, maxaa kugu kallifay in aad daba-dhilif ugu noqoto dad qorshahoodu yahay in ay taariikhda been ka sheegaan, iyagoo ilowsan in Adduunka aynu ku nool nahay wax walba haddii la sameyn karo, waxaa keliya ee aan la sameyn karin inay tahay taariikh aan jirin? Maxaa kuu diiday in aad maskaxdaada la tashato oo aadan reer iyo dad lunsan kuu talin? Markuu Ilaahay Aadamaha abuuray qof walba maskax uu keligii leeyahay ayuu u sameeyay, ma sameyn in uu qofna qof kale ugu dhiibo maskax.
Akhristow! Waxaa isweydin mudan, maxaa dhaliyey ama sababay in qoraalladii xambaarsan magac ”Maxamed Cali Geel-Jire si edeb darro ah looga buuxiyye ”aflagaado iwm.”? Wax kale ma ah waxaa laga kululaaday lagana carooday dhambaalkii iyo Shahaadadii ku saabsanaa magacaabidda Aw Munye Xaaji Cabdulqaadir Suldaanka Tunni di Brava oo aan ku daabacay Websitka baraawepost. Si kastaba arrintu ha u dhacdee, runta in aad wax ka sheegto oo lagugu naco iyo been in lagugu jeclaado, waxaan doortay in runta aan sheego wixii aan ka ogahay taariikhdeena.
Sida aan qabo anigu ayaaba waxay tahay Dalkeena dhaqamada aafada lahaa ee haleeyay iney ka mid tahay ”runta waxa la yiraahdo oo aysan labana isu sheegeyn”. Waxaa dadka la baray been, munaafaqeyn, isku kalsooni la’aan in wax lagu sameeyo iyo khiyaano dadku ha kugu jeclaado ama in wax lagu siro loogu talagalay.
Haddaba, Geel-jirow, soow adigu ma ahayn qofkii dacaayadda ka fidiyay Suldaan Aw Faqi Xaaji Awiis, goobo kala gedisanna sow kama aadan sheegin hadaladan hoos ku qoran:
1. In Aw Faqi Xaaji Awiisa uu ahaa nin ”gacan ku dhiigle ah”, dad Badanna uu xasuuqay, gaar ahaan abtiyaashaada oo uu doon saari jiray dabadeedna badda uu ku daadin jiray;
2. Soow adigu ma oran Aw Faqi Suldaannimadiisu waxaa celeemo
Saaray Dowladdii Fashista ahaa ee Talyaani oo keliya, cid isaga ka horeeysay oo Reer-kiisa ka tirsanayd oo Suldaan noqotay ma jirin;
3. Maantana sheeko kale ayaad keentay. Marka keeba sax ah, noo kala caddey kii hore miyaan qaadanaynaa, mise tan beryahaan dambe aad aliftay?
4. Soow adigu ma ahayn qofkii cadaadin jiray maatadeena ku noolayd Tuulada Maringuwaay? Raadadka Dulmiga aad ka gashay Walaalaheena Reer Maringuwaay, weli ma qalalin ee way muuqdaan, haddii uu Eebbe raalli ka noqdo waqti ayaa imaan doono oo lagula xisaabtami doono boogtii aan weli naga bogsoon.
Geel-jirow! Soomaalidu waxay tiraahda “Maroodigu takarta saaran ma arkee midka kale tan saaran buu arkaa”. Maah-maahdan waxaa la adeegsadaa marka la arko qof aan isagu isu jeedin waxa uu yahay amaba khaladaddkiisa oo qof kale xumaatadiisa amaba khaladaadkiisa ku caayaya ama ku cambaareynaya. Mitaal qof hunguriyahan ah oo qof kale isla arrintaas ceebta ah ku ceebeeyay oo aan isagu isu jeedin in uu kaas uu caayayo la mid yahay amaba arrintaas kaga sii xun yahay, sida adiga aad ku sifowday Geel’jirow.
Sida runta ah, hadafkeyga ma ahayn in aan jawaab ka bixiyo hadalada lagu xusay qoraallada aan tixraacayo, laakinse waxaan ka maarmi waayay in aan Bulshadeena u ifiyo, oo aan barro shaqsiyaddaa waxay tahay, si aan uga digo in aysan ku dhicin dabin kaaga, isla markaana adigu naftaada ku waaniyo, kuuna muujiyo in agteyda wax qiimo ah oo ad ku leedahay aysan jirin, waxaana kuu fasaxay in wax allaale wixii aad doonto aad igu tilmaami kartid, wax jawaab ah ama ficil celin ah ma iga heleysid hadda ka dib.
Haddaan la kala weynaan oo aan la isku dulqaadan, nolol, nabadgelyo iyo horumar midna lama helo, mana habboona in xaarka la isla qasto oo mar walba iyo meel walba waa inuu maanku taliyo oo la kala roonaado (la kala weynaado).
Waa Billaahi Towfiiq
Dr. Cabdulcaziz Abukar Baffo